बेलौरीको पचुईस्थित ३८ नम्बर पिल्लरको १३ सय मिटर सडक कहिले कालोपत्रे होला ? - Mahendranagar Post
Home Top News बेलौरीको पचुईस्थित ३८ नम्बर पिल्लरको १३ सय मिटर सडक कहिले कालोपत्रे होला...
बेलौरीको पचुईस्थित ३८ नम्बर पिल्लरको १३ सय मिटर सडक कहिले कालोपत्रे होला ?
कञ्चनपुर-कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाको दैजी देखी पुनर्वास नगरपालिकाको मोहनापुल सम्म ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी नगरपालिका-८ पचुई अन्तर्गत खप्टी नालासम्मकाे १३ सय मिटर सडक खण्डको कालोपत्र हुन सकेको छैन।
३८ पिल्लर नम्बर नजिकै रहेको १३ सय मिटर सडकखण्डको काम अगाडी बढाउन नदिन एसएसवीले त्यहाँ नजिकै क्याम्प खडा गरेको छ। सडकको काम भए नभएको बारेका क्याम्पबाट एसएसवीले निकालिरहेका हुन्छन्।
झण्डै डेढ बर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणको काम भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसवी) ले पटक पटक अवरोध गर्दै आईरहेको छ। पचुई सशस्त्र प्रहरीको बीओपी र बेलौंरी घर स्थित बीओपी रहेका छन्। तर आफ्नो सिमा रक्षाका लागि त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीले पनि केही एसएसवीसँग समन्वय गर्न सकेको छैन।
गत वर्ष कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले बिबादीत हुलाकी सडकलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर कुनै पनि निकास निस्कन सकेन। आईतवार पनि कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महत्तोको नेतृत्वमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। सिडिओको नेतृत्वको टोलीले कञ्चनपुरको डोके बजार देखि बेलडाँडीसम्म अनुगमन गरेको हो।
टोली अवरोध गरिएको १३ मिटर सडक खण्डको समाधानका लागि नभएर कृषि कार्यका लागि गरिएको अवरोधका बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्न कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुगेको थियो। विवादास्पद सिमा क्षेत्रका बारेका दुवै देशका सिमा सुरक्षा बलसँग मौखिक छलफल भएको बताईएको छ।
जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाको प्याराताल, खड्डाकंकर, बेलौरीको पचुई र भुँडामा भएको अतिक्रमण भुमीको निरीक्षण गरिएको सिडिओ महत्तोले बताए। विबादास्पद क्षेत्र छ दुई देशबीच छलफल जारी रहेकाले छिट्टै समाधान हुने उनले बताए।
बेलौरी नगपालिका- ८ पचुईस्थित ३८ नम्बर सिमा पिल्लर नजिकै रहेको १३ मिटर सडक खण्डको निर्माण कार्यको अवरोध खुलाउन गएको अन्तराष्ट्रिय सरोकार समुहको डेलिकेशनलाई दश दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। दुबै देशको संयुक्त नापजाँच टोली आएका बखत समेत सो विषयमा कुरा उठाएको भएपनि कुनै निकास निस्कन नसकेको हुलाकी सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले बताए।
बेलौरीको पचुई क्षेत्रको १३ सय मिटर सडक खण्डलाई एसएसबीले उक्त भूमि भारतमा पर्ने भन्दै काममा अवरोध सिर्जना गर्दा डेढ वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए।जुनसुकै देशको सिमा दसगजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ९.१ मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि उक्त क्षेत्रमा सिमा स्तम्भ बाट करीब २१ मिटर नेपालतर्फ सडक बनिरहेको सडकमा भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) निर्माण काम अगाडी बढाउन दिएको छैन।
बेलौरी क्षेत्रमा सडक निर्माणको विषयलाई भारतीय एसएसबीले विवाद गर्न थालेको डेढ वर्ष बित्दा समेत विवाद सामाधान गर्न सरकारले चासो नदिइएको भन्दै स्थानिय आक्रोसित बनेका छन।
स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोलाई भेटेर अवरोध रहेको काम सुचारु गर्न पटक पटक माग गर्दै आएपनि सरकारले चासो भने दिएको छैन। यता भारतीय एसएसबीले सडक निर्माणको विषयलाई लिएर अनावश्यक दुःख दिन थालेको हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बाबा हंस सिद्धी शाही जेभीका निर्माण व्यवसायी चक्र शाही बताउँछन्।
Previous articleभीमदत्त नगरपालिकाले दियो महाकाली अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरको पारिश्रमिकका लागि १० लाख
Next articleधनगढीको चौराह दुर्घटना अपडेट : एक जनाको मृत्यु, दुईको अवस्था गम्भिर